Electric Bus Air Conditioner for Electric Double Decker Bus factory and manufacturers | ABG
JLE Series, maka 10-12m okpukpu abụọ decker, ahaziri
Nka na ụzụ nkọwapụta nke Electric Ugboro abụọ Decker Bus A / C JLE Series:
48 kW ma ọ bụ 163776 Btu / h
Ike kpo oku
42 kW ma ọ bụ 143304 Btu / h
6000 + 6000 m3 / awa (6 + 6)
1100 m3 / awa
Jụrụ Ike Oriri
1. Igwe refrjiraeto bụ R407C.
2. Igwe ikuku ikuku na-arụ ọrụ n'ozuzu karịa igwe azụ, a ga-atụle ya maka ntinye ka a gbanye ya n'ozuzu ya, ma wepụta ya maka imegharị. Ejiri eriri ikuku nke njikọ mgbanwe n'etiti otu na eriri ikuku n'ime ụgbọ ala ahụ ngwa ngwa.
4. airgbọ mmiri ikuku nke njikọ mgbanwe site na ntụ oyi ikuku na ikuku ụgbọ ala nwere ụdị pụrụ iche, yabụ imewe kwesịrị ịtụle arụmọrụ nke ntinye ma belata nguzogide nke ikuku ikuku. Ifufe ikuku nke uzo ngaji aghaghi ibu≤12m / s.
5. Ọsọ ọsọ nke ikuku ọkọnọ isi ụgbọ ala ga-abụrịrị ≤8m / s.
6. Ọ kachasị mma ịtọlite ​​grille nloghachi ikuku iche iche dabere nha ikuku ikuku nke elu na ala ala. Ma ọ bụ enwere ike ịtọ ya iche iche maka elu ụlọ, ala ala na-eweghachi ikuku site na steepụ.
6. Mgbakọ ndị na-achịkwa eletriki dịka igbe nchịkwa eletriki na inverters nwere ụfọdụ ohere n'ime ụgbọ ala ahụ, a ga-atụlekwa ya na ọnọdụ ikuku na nke mmiri.
7. JLE-IIIB-T azụ-n'ịnyịnya (okpomọkụ mgbapụta gbakwunyere PTC) ike batrị thermal management ọrụ.
8. Biko kpọtụrụ anyị na sales@shsongz.cn maka nhọrọ ndị ọzọ na nkọwa.
1. Mkpokọta etiti Ọdịdị, jikọtara na aluminum alloy shei, bụ nnukwu na size na ìhè na ibu ibu.
2. Na-agbanwe agbanwe ntụgharị teknụzụ na-ahụta ọnọdụ ọsọ ọsọ nke ndị nrụnye na ndị Fans, na-ebelata ike ike ọrụ.
3. Omenala mmepe, modular imewe, ìhè arọ.
4. DC fanless, ogologo ndụ na ìhè arọ.
5.The okpomọkụ mgbapụta imewe, jiri ya tụnyere ot mgbanwe, nwere ike na-aghọta okpomọkụ mgbapụta kpo oku ma belata oriri ike.
6.CAN akara ụgbọ ala, interface idobere na ndabere maka mgbasa ozi ịkparịta ụka n'usoro ụgbọ ala.
7. Ọgaranya nhọrọ teknụzụ
7.1. Ọrụ "njikwa igwe ojii", chọpụta njikwa na nchoputa, ma melite ọrụ ngwaahịa na nlekota ikike site na itinye ngwa data.
7.2. High-voltaji njikọ mgbochi rụrụ technology
7.3. Ejikọtara arụmọrụ njikwa batrị batrị, dịka ihe ndị ahịa chọrọ na-enweghị emetụta mmetụta jụrụ oyi nke ụgbọ ahụ.
7.4. DC750V nnukwu voltaji
Nke gara aga: Igwe eletrik na-ekpo ọkụ maka ụgbọ ala na ụgbọ ala eletrik, ikuku ikuku abụọ
Osote: Batrị Igwe Ọdụdọ Igwe Igwe Maka Ọdụ Egwuregwu, na Nchịkwa